मेरो स्कूल , स्मार्ट स्कूल (शून्य लगानी) - Living with ICT
Home / Featured / मेरो स्कूल , स्मार्ट स्कूल (शून्य लगानी)
Admin Jan 17, 2017	Leaveacomment
एक्काइसौ शताब्दीको युग इन्फरमेसन्स टेक्नोलोजिको युग । संसारमा जति पनि देश विकसित भएका छन् र जो विकासन्मोखतिर अग्र भए
र हिडेकाछन् तीनले आइ.टी. लाई अंगालेर नै हो , यसमा कसैको दुई मत नहोला । वास्तवमा आइ.टी. ले सिस्टम बनाउँछ , यसले समय बचाउँछ । त्यो भन्दा पनि माथि यसले पल पलको इन्फरमेसन दिलाउँछ ।
नेपालमा आइ.टी. को विकास त भइरहेकोछ तर एकदमै झयाँसमिसे र सुस्त गतिमा भन्नाले कुनै क्षेत्रमा चुस्त र कुनैमा सुस्त । तसर्थ जरादेखि नै मजबुत बनाउँन यसको सुरुवात फेरि स्कूलबाट गर्ने निधो लिएर इजि एक्सेस नामक संस्था मेरो स्कूल , स्मार्ट स्कूल का नारा सहित अगाडि बढेकोछ ।
यदि एउटा यस्तो सिस्टमको हरेक स्कूलमा विकास गर्न सकियो भने त्यसले पूरै परिवारलाई नै आइ.टी. मय बनाइदिन्छ भन्ने विश्वासका साथ साथै आफनो वच्चाको हरेक गतिविधि एस.यम.यस , वेभ र मोवाइल याप मार्फत जनकारी पाउँदा भावी सन्तती उचित स्थानमा हिड्न सक्छन भन्ने हाम्रो यो विश्वास अब सबैको विश्वास बन्न सक्दछ ।
संसारमा हाल चलिरहेको स्कूल सफटवेयर , क्लाउड सिस्टम, आर यफ आइ डी अटन्डेन्स सिस्टम, मोवाइल याप, एस.यम.यस, जिपियस ट्राकिङ सिस्टम ले भरिपूर्ण प्याकेज सहित इजि एक्सेसले प्रत्येक स्कूललाई बिना लगानि दिलाउनेछ । अझै विस्तृत रुपमा छलफल गर्ने हो भने आर यफ आइ डी अटन्डेन्स सिस्टमले हरेक विधार्थीको इन र आउट स्कूल समय स्वचालित हाम्रो स्फटवेयरमा राख्ने, अभिभावकलाई एस.यम.यस पठाउने काम गर्दछ । यो एउटा स्वचालित सिस्टम हो ।
प्रत्येक विधार्थीको दैनिक क्रियाकलाप जस्तै हाजिर, रिजल्ट, अनुशासन, फि आदि अभिभावकले वेभ, मोवाइल याप मार्फत जानकारी पाउन सक्छन । कुनै नोटिस, मिटिङ छ भने स्कूलले एस.यम.यस मार्फत जानकारी गराउन सक्छन् । काठमाडौको बढदो ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गरेर जिपियस ट्राकिङ सिस्टम समावेस गरेकाछौ । यसले स्कूल बसको लोकेसन, स्पीड, इन्धन इत्यादिको जानकारी हामी एउटै सिस्टमबाट पाउँछौ ।
अन्त्यमा लाइभ डेमो हेर्नका लागि स्टल नं टी २६, क्यान इन्फोटेकमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ ।
Previous शाओमीका नयाँ भर्सनका स्मार्टफोनहरु बजारमा
Next सुविसु क्यान इन्फोटेकमा २ सय २२ स्टल, अनलाइन टिकटमा छुट